Bible Mu Nsɛm Efi Nsuyiri no So Besi Misraim Ogye So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Nnipa baawɔtwe pɛ na wotwaa Nsuyiri no, nanso bere rekɔ so no wɔsan bɛyɛɛ mpempem pii. Na, Nsuyiri no akyi mfe 352 no wɔwoo Abraham. Yehu sɛnea Onyankopɔn dii ne bɔhyɛ so ma Abraham woo ɔbabarima a wɔfrɛ no Isak. Na, Isak mmabarima baanu no mu no, Onyankopɔn paw Yakob.
Ná Yakob wɔ mma pii, mmabarima 12 ne mmabea. Yakob mmabarima 10 tan wɔn nua kumaa Yosef na wɔtɔn no kɔɔ nkoasom mu wɔ Misraim. Akyiri yi, Yosef bɛyɛɛ sodifo titiriw wɔ Misraim. Bere a ɔkɔm kɛse bi bae no, Yosef sɔɔ ne nuanom hwɛe sɛ wɔanya adwensakra anaa. Akyiri yi, Yakob abusua no nyinaa, Israelfo no, tu kɔɔ Misraim. Wɔwoo Abraham no akyi mfe 290 na eyi bae.
Mfe 215 a edi hɔ no mu no Israelfo traa Misraim. Yosef wu akyi no wɔbɛyɛɛ nkoa wɔ hɔ. Bere bi akyi no, wɔwoo Mose, na Onyankopɔn nam no so gyee Israelfo fii Misraim. Ne nyinaa mu no, wɔka mfe 857 mu abakɔsɛm wɔ Ɔfa a Ɛto so ABIEN yi mu.